Onye isi ala nke Italian Republic - World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Onye nkwanye ugwu diri onye isi ala nke Italian Republic
28 / 05 / 2020 28 / 05 / 2020 site Antonio Gancedo
Site na Kọmitii Nkwalite Italiantali nke World March maka Udo na Ọdịghị Nlekọta nke Onye Isi Ala nke Republictali
Mee 27 nke 2020
Ezigbo Maazị Onye isi ala
Ọchịchị nke Republic
Ezigbo Onye isi ala, afọ gara aga maka ụbọchị Republic o kwupụtara na “n'akụkụ ọ bụla nke nnwere onwe na ochichi onye kwuo uche ha, ha adabaghị na ndị na-eme ka esemokwu ahụ pụta, na-achọ mgbe niile ka onye iro mata.
Naanị okporo ụzọ imekọ ihe ọnụ na mkparịta ụka nwere ike imeri ọdịiche, na
kwalite inwe mmasị na mba ụwa ”.
Mkparịta ụka na esemokwu kemgbe mbipụta ya nke izizi na 2009 gara n'ihu n'ụzọ ya, site na March ụwa maka Udo na Nkwụsịghị, nke Rafael de la Rubia tụụrụ ime ma hazie nke mkpakọrịta nke "World enweghị Wars na enweghị Ime Ihe Ike", na ntinye nke ndị mmadụ, òtù na ụlọ ọrụ site na mpaghara isii.
Agba nke abụọ nke World March bidoro na Madrid na Ọktọba 2, 2019, Daybọchị Ọhụụ nke
Nationstù Mba Ndị Na-emeghị Ihe Ike ma kwụsị na March 8, Women'sbọchị Internationalbọchị Ndị Nwanyị International, na Madrid. Na mmepe ya, e metụrụ isiokwu dị iche iche na:
mmejuputa iwu ngwa ngwa nke Nkwekorita Ngwurugwu Nuclear, iji mee ka ego ekenyela
na mbibi na afọ ojuju nke mkpa mmadụ;
iji nwetakwa ndi otu United Nations na ntinye aka nke ndi mmadu, iji mee ka ndi ochichi ya nwee ochichi
A ga-agbanwe ka ọ bụrụ ọgbakọ udo ụwa, wee mepụta Council Security
Gburugburu ebe obibi na aku na uba;
na-ewu ọnọdụ maka mmepe mmepe n'ezie na mbara ala;
tinye mba na mpaghara na mpaghara, ma soro usoro akụ na ụba iji hụ na ọdịmma ahụ
merie ụdị ịkpa oke niile;
nakweere Nonviolence dika omenaala ohuru, ya na Nonviolence di ka usoro eji eme ihe.
World March nwekwara n’obodo Ọktọba 27 ruo Nọvemba 24, ụzọ ụgbọ mmiri gaa n’osimiri Mediterenian nke udo na enweghị ngwa agha nuklia, dabere na Nkwupụta Barcelona (2019).
Kọmitii fortalianụ maka Nkwalite World March maka Udo na Ọdịghị Mpụ Ime ihe ike ga-eyigharịrị ọnọdụ ndị nnọchi anya mba ụwa n'ihi Covid19, mana n'ọtụtụ obodo, enwewokwa ihe mmalite nke isi okwu Machị.
Na ncheta afọ nke 74 nke ọmụmụ nke Republic, anyị na-emeghachi nkwa na ebumnuche anyị, dị ka a kọrọ n'April 1 na nkwupụta mba ụwa na-agbaso na arịrịọ nke Secretary General General António Guterres: “Na esemokwu niile akwụsị, ka itinye uche na ezi ọgụ nke ndụ ”.
N'ime akwụkwọ ahụ, Rafael de la Rubia kwupụtara na “n'oge njegharị ụwa na nso nso a, anyị ahụla na ndị mmadụ chọrọ ibi ndụ dị nsọ, maka onwe ha na maka ndị ha hụrụ n'anya. Ndi mmadu aghaghi imuta ibikọ ọnụ ma nyere ibe ha aka. Otu n'ime ihe otiti nke ihe a kpọrọ mmadụ bụ agha, bụ nke na-emebi ebe obibi ma mechie ọgbọ ọhụrụ n'ọdịnihu "
Kọmitii Nkwalite Italy na-akwado arịrịọ ndị a na-eme kemgbe ọdịdị nke Covid-19
imeghari mmefu agha iji kwado ahụike, ịda ogbenye, gburugburu ebe obibi, na agụmakwụkwọ. Chetakwa atụmatụ ụmụ amaala ahụ nke ka dị na nzuko omeiwu, maka nguzobe na ego nke ngalaba nchekwa obodo na-anaghị emerụ ahụ na nke na-adịghị eme ihe ike, na-akwalite mkpọsa banyere mkpokọta mkpokọta puku kwuru puku ndị bịanyere aka na Italytali.
Anyị na-egosipụta nchegbu anyị gbasara ihe egwu bilitere na ọnwa ndị a metụtara
dijitalụ na nnwere onwe onwe ya site na netwọ 5G.
N'ụbọchị mmemme a, nke dị oke mkpa nye mba ahụ n'oge a dị egwu, anyị na-echigharịkwuru gị dị ka onye kwenyebere iwu na nkwenye na oge eruola (ugbu a) ịme ihe ọ bụla maka ọdịmma nke onye ọ bụla na onye ọ bụla. Nchedo gburugburu ebe obibi.
N’ọgbọ ọhụrụ, ndị ha na-agakwuru, dịka n’oge okwu mkparịta ụka na nso nso a maka ogbugbu ndị Capaci, anyị achọghị ịhapụ ụwa dịka nke anyị bi na ya taa. Anyị kwenyere na .tali
Ọ kwesịrị ịme ka akụrụngwa bụrụ isi okwu siri ike nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụnụba ya dịka Iwu ahụ siri dị. Nzọụkwụ mbụ ga-abụ nkwado oge nke nkwekorita nke United Nations na Mkpuchi Ngwakọta Nuklia, nke na-emetụta anyị nke ọma n'ihi ọnụnọ nke ndị agha nuklia 70 na ntọala nke Aviano (Pordenone) na Ghedi (Brescia), ngwa mbibi. zuru ụwa ọnụ ugbua n'okporo ụzọ. na ịdị adị na ọdụ ụgbọ mmiri nuklia dị 11 nke ndị agha: Augusta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Gaeta, La Maddalena, La Spezia, Livorno, Napoli, Taranto na Trieste.
Dabere na edemede nke 11 nke Iwu ahụ, anyị na-arịọ gị ka itinye aka ngwa ngwa n'akụkụ ndị a dị ka ohere na ọrụ iwu gị si dị, maka ịchụ ego maka mmefu agha, mwepu nke ndị agha Italiantali na nnọkọ iwu na-akwadoghị nke mba ọzọ. , na mmechi nke agha ndị agha mba ọzọ hà n ’Italia.
Onye buuru ya ụzọ Sandro Pertini kwadoro onye thattali nke wetaara ụwa udo: “ee, tọgbọrọ akụ nke isi iyi ọnwụ, wee mejupụta onyinye ụmụ mmadụ, bụ isi iyi nke ndụ nye ọtụtụ nde ihe ndị e kere eke na-alụso agụụ ọgụ. Nke a bụ okporo ụzọ udo anyị ga-eso. "
N'ebe enwere agha agha, oke ọhịa ga-eto (ka anyị chọrọ ka ha too?) Inye oxygen, nke mere ọtụtụ mmadụ furu n'oge ọrịa na na anyị kwesịrị ịzụlite nrọ, ma hụ ka ha na-eto na ndụ ndị ọgbọ na-agafe agafe, bụ ndị nwere nnukwu mkpa nke ọdịbendị.
Kọmiti Nkwalite Worldtali World March maka Udo na Ọgba aghara
1 kwuru banyere "Onye isi ala nke Republictali Republic a na-akwanyere ùgwù"
29/05/2020 na 17:25
Ọ dị mma na m ga-echere ka anyị site na Colombia anyị nwee ike ịgbakwunye ebe ọ bụ na anyị na-ama jijiji site na otu mmetụta ahụ maka ịchọ Udo, ọ bụghị agha, ọ bụghị bọmbụ atọm, ọ bụghị ụdị ime ihe ike ọ bụla. Marchwa Machị 1 na 2 ahapụla nnukwu ọnọdụ ha mmetụta nke owuwu nke ụwa ọhụrụ na ọdịnihu ghere oghe. Enwere ọtụtụ n'ime anyị dị mma ma anyị chọrọ mgbanwe ụwa. Udo, ike na ọyụ. Ceciu